Wararka Suuqa Caawa: Kuwa Ugu Danbeeyay Thiago Silva, Dusan Vlahovic, Attila Szalai, Ernesto Valverde, Iyo Dembele
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa Caawa: Kuwa ugu Danbeeyay Thiago Silva, Dusan Vlahovic, Attila Szalai, Ernesto Valverde, iyo Dembele
November 25, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Daafaca Chelsea Thiago Silva ayaa qarka u saaran inuu saxiixo qandaraas cusub, sidaas waxaa qortay UOL.
Weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic ayaa meesha ka saaray inuu ka tagayo bisha Janaayo, isagoo ku adkeystay inuu doonayo inuu ka caawiyo kooxda Serie A inay u soo baxdo Yurub. Telegraph
Chelsea ayaa isha ku haysa daafaca Fenerbahce Attila Szalai – sida laga soo xigtay Football Insider.
Manchester United ayaa wadahadalo la yeelatay tababarihii hore ee Barcelona Ernesto Valverde si uu si ku meel gaar ah ugu qabto kooxda madama Kooxda ku adagtahay Magacaabida Tabare rasmi ah inta ka hartay Sanadka Cusub. GOAL
Wolves ayaa albaabada u furtay iibka Adama Traore iyada oo uu jiro xiriir uu lala leeyahay Liverpool – sida laga soo xigtay Football Insider .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Granit Xhaka ayaa u furan inuu ku laabto Borussia Monchengladbach. MIT Geredit
Manchester United ayaa isha ku heysa xaalada qandaraaska Ousmane Dembele ee Barcelona – sida laga soo xigtay El Nacional .
Aston Villa ayaa qarka u saaran inay iska iibiso Bertrand Traore bisha Janaayo – sida laga soo xigtay Football Insider .
Unai Emery ayaa ka mid ah magacyada Manchester United ay ka fiirsaneyso inay ka dhigto tababarahooda xiga, sida ay ku warameyso Bild .